Home » Lahatsoratra farany farany » Fanavaozana ny tanjon'ny dia » Rivodoza mahery setra Ida amin'ny làlana ho an'ny faritra New Orleans
Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Avy hatrany ny fianjeran-tany manimba ataon'ny rivodoza Ida ho an'i South Louisiana, akaikin'i New Orleans any Etazonia.
Ny tafio-drivotra goavambe, mety ho ny mahery indrindra mandritra ny 150 taona dia mety hivoatra amin'ny tafio-drivotra sokajy 5, ary ho tratra amin'ity tafio-drivotra ity dia tsy azo inoana.
Ny rivodoza Ida dia fohy amin'ny rivodoza 5 mahery izay noheverina fa namely ny South East Louisiane Coast sy Kentucky, Etazonia tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro. Ny fiantraikany ratsy indrindra dia antenaina tokony ho 50 kilaometatra avy any New Orleans.
Ity no mety ho tafio-drivotra mahery indrindra voarakitra any Etazonia nandritra ny 150 taona mahery
Ny olona tsy namindra toerana dia tokony hahalala ny fiakaran'ny ranomasina miakatra 15ft, tornado ankoatry ny rivodoza mahery 150+ mph
Tamin'ny 5 maraina ora teo an-toerana dia mbola nihahery hatrany ny tafio-drivotra.
Miambina ny zandarimariam-pirenena rehetra mba hanampy rehefa avy ny tafio-drivotra.
Ny hopitaly dia efa mihazakazaka matetika amin'ny fahaizany noho ny fiakarana COVID-19 goavambe.
Amin'izao fotoana izao dia 150 mph ny hafainganam-pandehan'ny rivotra, 7 kilometatra fohy monja amin'ny tadio sokajy 5.
Ireo mpitondra tenin'ny indostrian'ny hotely any New Orleans dia nilaza fa voaomana ireo hotely hiambina ireo vahiny.
Hotely maro no amidy any Arkansas, Texas, Louisiana amin'ny alàlan'ny vahiny avy any Louisiana atsimo manandrana mandositra ny rivodoza Ida.
Fahitana tsy misy te hahita izany amin'ny zanabolana. Ida, tafiotra mahery vaika sokajy 4 misy rivotra maharitra maharitra ankehitriny izay 145mph dia manohy manatona an'i Louisiana atsimo atsinanana. Mijanona ho toe-javatra matotra sy mandrahona ny ainy io. Araho hatrany ireo fanavaozana matetika. #lawx #mswx pic.twitter.com/SMs227S3CH
- NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) Aogositra 29, 2021
Ny rivodoza dia antenaina handalo mivantana amin'ireo orinasa simika sasany. Tsy mbola nisy izany ary mampatahotra hoy ny manampahaizana.
Ity fampahalalana ity dia manomboka amin'ny 6 maraina ora eo an-toerana:
Rivo-doza Ida Tropical Cyclone Vaovao farany NWS National Hurricane Center Miami FL AL092021 600 AM CDT Sun Aug 29 2021 ... NOAA PLANE FINDS IDA STRONGER ... ... KATEGORIANA MAHARITRA 4 KARAZANA HURRICANE NO VOAFITRA HANAO LANDFALL AMIN'NY LOUISIANA ATSIMO ATSINY .. .Ny tatitra avy amin'ny fiaramanidina Hurricane Hunter NOAA dia nanondro fa ny rivotra be indrindra dia nitombo hatrany amin'ny 150 mph (240 km / h) miaraka amin'ny rivotra mahery. Ny tsindry foibe farany ambany farany farany tombanana avy amin'ny angon-drakitra fiaramanidina mpanara-maso dia 935 mb (27.61 in). Toeram-piantsonana NOAA C-MAN avo lenta ao amin'ny Station an'ny Pilot Atsinanana akaikin'ny Southwest Pass, Louisiana, no nitatitra ny rivotra maharitra 82 mph (131 km / h) ary tafiotra hatrany amin'ny 107 mph (172 km / h). Toeram-piantsonana C-MAN avo any NOAA any Southwest Pass no nitatitra ny rivotra maharitra 77 mph (124 km / h) sy ny tadin-drivotra 93 mph (150 km / h). FAMINTINANA 600 AM CDT ... 1100 UTC ... INFORMATION ------------------------------------ ---------- LOCATION ... 28.3N 89.4W MOMBA NY 75 MI ... 120 KM SSE OF GRAND ISLE LOUISIANA MOMBA NY 60 MI ... 95 KM SSW NY VAVaky NY MISSISSIPPI RIVER MAXIMUM SUSTAINED WINDS ... 150 MPH ... fihetsiketsehana 240 KM / H PRESENT ... NW NA 315 DEGREES 15 MPH ... 24 KM / H MINIMUM CENTRAL PRESSURE ... 935 MB ... 27.61 INCHES